Kushanya kwaMai Pillay Kwotarisirwa kuShandura Nyaya dzeKodzero dzeVanhu
Kushanya kuZimbabwe kwenhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu, Amai Navanethem Pillay, kunonzi nevamwe kuchabatsira zvikuru kuti sangano iri rizive mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu.
Asi vamwe vati kushanya uku hakuna zvikuru zvakunoshandura nekuti Amai Pillay vapinda munyika zvinhu zvakagadzikana, sezvo mhirizhonga zhinji muZimbabwe ichiitika munguva dzesarudzo.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakavimbisa Amai Pillay kuti sarudzo, idzo vakati dzichaitwa chete gore rino, dzichange dzisina mhirizhonga.
Ukuwo mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vakaudzawo Amai Pillay kuti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe dzadzikira, kunyange hazvo pachine zvizhinji zvinoda kuitwa.
Amai Pillay vari munyika kwemazuva mashanu mushure mekukokwa nehurumende.
Vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weCenter for Research and Development, VaFarai Maguwu, vati uyu mukana wakanaka sezvo Amai Pillay vakawana nguva yekusanganawo nevemasangano akazvimirira pamwe nevamiriri vehurumende.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, VaLivingstone Dzikira vaudzawo Stuido 7 kuti kushanya kwaAmai Pillay kwakakosha zvikuru kuZimbabwe sezvo kuchapa mukana wekuti pasi rose rizive mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu.
Hurukuro naVaFarai Maguwu pamwe naVaLivingstone Dzikira